Geeska Afrika oo go’aaminaya guryo celinta qaxootiga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Geeska Afrika oo go’aaminaya guryo celinta qaxootiga
Geeska Afrika oo go’aaminaya guryo celinta qaxootiga
Arbacada maanta ah caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa waxaa ka furmay shir gobolleed looga hadlayo arrimaha qaxootiga geeska Afrika, waxaana ka qaybgalaya madaxda dalalka Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda iyo Yemen kuwaasoo martiggeliya Soomaalida cooladuhu salkiciyeen.
Ujeeddada ugu weyn ee shirkaasi ayaa ah in taageero caalami ah loogu raadiyo dib u dejinta qaxootiga iyo xaqiijinta tasiilaad ku filan oo ay dib ugu noqdaan si ay uga qayb qaataan nabadda iyo degganaashaha waddankooda.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa shirka lagu casuumay waxaana lagu wadaa inay ka warbixiyaan sida ugu fudud ee wax loogu qaban karo dadka magangelyo doonka ah ee ku baahsan gobolka.
Dhinaca kale, Kenya oo ah waddan ay ku sugan yihiin qaxootiga ugu badan ee Soomaaliya waxaa kulanka u metelaya wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka Joseph Ole Lenku oo ay wehliyaan masuuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga farsamada ee dib u dejinta xaqootiga Cali Qorane.
Sidoo kale shirkaasi waxaa khudbado ka jeedinaya madaxa hey’adda qaxootida u qaabilsan Qaramadda Midoobay ee UNHCR, Antonio Guterres iyo wakiillo kale oo ka socda ururada samafalka.
Sannadkii lasoo dhaafay ayey aheyd markii heshiis saddex geesood ahaa lagu gaadhay dib u celinta qaxootiga Soomaaliya.
Previous articleSaxafadda iyo Af-Soomaaliga